Manohana ilay poeta an-dalambe voasazy handoa onitra ny tambajotra sosialy Kolombiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2019 6:27 GMT
Poeta an-dalambe, Jesús Espicasa miaraka amin'ny milina fitendreny. Sary avy amin'i Vladimir Diana, nozaraina tao amin'ny bilaoginy Ce Caudata. Nahazoana alalana.
Tamin'ny 10 Martsa, nipetraka niaraka tamin'ny milina fitendreny tao amin'ny sisin'ny arabe ao Bogotà, Kolombia ilay poeta an-dalambe, Jesus Espicasa. Nisy foara momba ny asa tanana teo akaiky teo ary nihevitra izy fa midanadana ho azy ny fotoana hivarotana ny tononkalony amin'ny mpandalo.
Saingy tsy faly tamin'ny fisiany ireo mpikarakara ny foara ka niantso polisy. Nanatona an'i Espicasa ny manamboninahitra iray ary nilaza azy mba hangoron'entana sy hiala, rehefa nandà ilay poeta dia nentina tany amin'ny tobin'ny polisy ary voasazy handoa onitra 833.000 pesos (260 dolara Amerikana) — onitra ambony indrindra ao amin'ny Fehezan-dalàn'ny Polisy ao Kolombia. Rehefa nanontany izay heloka vitany i Espicasa, dia toa nilaza ny polisy, tamim-pivazivaziana hoe, satria “poeta an-tsokosoko” izy.
Notantarain’ ilay mpanoratra Kolombiana malaza sady naman'i Espicasa, William Ospina, tamin'ny lahatsorany an-gazety, El Espectador tamin'ny 17 Martsa ny tantara voalaza etsy ambony. Niteraka resabe tao amin'ny tambajotra sosialy Kolombiana ny tantara ary nitarika adihevitra manerana ny firenena momba ny andraikitry ny tononkalo eo amin'ny fiainam-bahoaka.
Nohadiadian'ny radio RCN avy eo i Espicasa ary nilaza fa tsy vao voalohany izy no niharan'ny tranga toy izao, na koa mpanakanto hany niharan'ny tsy fanajan'ny polisy. “Manosika ny [mpanakanto] ho eny an-dalambe ny andrim-panjakana ary avy eo mandray azy ireo toy ny jiolahy,” hoy izy.
Tao amin'ny famakafakany, nilaza i William Ospina fa miresaka ny fomba fijerin'ny manampahefana ny toeram-bahoaka ny tantaran'i Espicasa — ary koa ny andraikitry ny mpanakanto amin'izy ireo. Nanamafy i Ospina fa tokony hofoanana ny onitra ary mendrika omena fialan-tsiny i Espicasa:
Tsy vitany hoe mendrika omena toerana ao an-tanàna ny mpanakanto, fa mendrika fanajana avy amin'ny olom-pirenena sy ny manampahefana ihany koa. Manasazy azy ireo ny mpanao didy jadona ary milaza azy ireo ho jiolahy. Ao amin'ny firenena feno heloka bevava tena izy sy mpanao kolikoly! […] Nahoana izy ireo no miantso izany hoe “toeram-bahoaka”, toerana izay tian'izy ireo handroahana ny olom-pirenena hiala teo, toerana izay tadiavin-dry zareo amin'ny fomba arivo samihafa ho lasa fananan'olo-tokana- ary ferana hatrany ny fahalalahana ary raisina toy ny heloka bevava ny fanehoan-kevitra tahaka ny mozika sy ny tononkalo
Tononkalo eny an-dalambe
Maro tamin'ireo olona ao amin'ny tambajotra sosialy no niaro an'i Espicasa. Mpisolovava sady mpahay momba ny heloka bevava, Daniel Mendoza nandray ny tranga toy ny fikasana hanampim-bava ny “fahatsiarovan-tena iombonana”.
Fanagadrana ho an'ireo mpanoratra sy mpanao tononkalo, fampijaliana ho an'ireo mpandika teny ny fahatsiarovan-tenantsika iombonana, tsy misy olona te hanafina izany, miaraka amin'ny fehilamba, fa hamela ny marina hiseho…..ary famelezana ny fitondrantena tsara izany.
Mpanao gazety Yolanda Ruiz Ceballos nanangana tenirohy #PoesiaALaCalle (#Tononkaloan-dalambe), izay hampaherezana ny olona hizara ny tononkalon'izy ireo na ny tononkalom-bahoaka hafa.
Ao amin'ny lahatsary manaraka, Ruiz Ceballos namintina ny zava-nitranga tamin'i Espicasa ary namaky ny ampahan'ny voalohany amin'ilay tononkalo “Ny fiafarana sy ny fiandohana“,avy amin'ilay poieta Poloney Wisława Szymborska:
# TononkaloAn-dalambe. Aza saziana ny tononkalo.